Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro ato amin’ny solosaina. Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre.
Vous pouvez aussi lire la Bible en 3 langues différentes: Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Mety misy vahaolana ve. J’aime revenir de temps en temps sur votre site pour y lire vos derniers articles, c’est pas pour rien qu’il se trouve en favoris chez moi. RAha sendra tsy lasasatria mavesatra dia ity ny lien mora ahafahana mitéléchérger azy sady malaky be. Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Salama,mba atoroy fomba hahazoana an’io Ny baiboliko 3.
Mankasitraka indrindra satria tsara tokoa ilay izy. Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao.
Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e! Isaorana ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono ho aho, izy io ve compatible am window 10? Misaotra mialoha Tompoko amin’izany version mobile izany. Ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly anareo, fa efa tsy dia mijery loatra ity blaogy bziboly intsony aho, noho ny fahateren’ny fotoana.
Salama,mba atoroy fomba sg an’io Ny baiboliko 3. Maintenant, vous pouvez consulter la bible en 3 langues différentes, en malagasy, en français ou en anglais. Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Mitelecharger ity baiboliko ity aho fa tsy mety kanefa teo aloha aho toa nety ihany fa inona no tokony hatao azafady indrindra.
Ny fihirana mbola tsy baoboly fa vao eo am-panamboarana mihitsy.
Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Ny Tompo anie homba anao hatrany amin’izay kasainao atao rehetra! Par un simple clic, vous pouvez poster directement sur votre mur facebook vos versets préférés. Miarahaba tompoko, ndrao misy manana solfa fihirana fihurana kay amin’tsika ato azafady, ito ny adresse email-ko herjessramamonjisoa gmail.
Tena sambatra, fihiranna an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata. Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro ato amin’ny solosaina.
Toa tsy mety mandeh mantsy le fihirans. Ho tahian’ny Tompo ianao! Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra. Ho tahian’Andriamanitra isika rehetra indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao.
Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Mba maniry hahazo an’ilay logiciel « Ny baiboliko 3. Mety misy vahaolana ve.
Fihigana Antananarivo Madagasikara gasysoft gmail. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa: Misaotra indrindra fa tena tsara, omen’Andriamanitra fahaizana mandrakariva e!
Misaotra betsaka fa azoko ihany ilay application ny farany. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: Windows 10 zao no nanandramako azy farany fa tsy misy olana mihitsy.
Tsy fihiraja intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin’ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa saingy tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no soratra miseho eo hoe: Averiko eto indray ilay izy:.
Bonjour, mila namana tena efa nandray ny tompoafaka mahita ve rabefa: Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre.